DKGS oo sheegtay in uu dhamaaday xiligii musuqmaasuqa xiriirka kubada cagta – SBC
DKGS oo sheegtay in uu dhamaaday xiligii musuqmaasuqa xiriirka kubada cagta
Posted by Webmaster on Noofember 21, 2011 Comments
Dowlada soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in xiriirka kubada cagta soomaaliya masuuliyiintooda kuwo caadaystay musuqmaasuq aan dhamaad lahayn oo sidoo kale baabiyay magacii qaranka iyo sharaftii shacabka soomaaliyeed.
Wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo sortiga Maxed Muxiyadiin Shiikh Mursal oo u waramay warbaahinta SBC ayaa sheegay in xiriirka kubada cagta masuuliyiintooda hada wixii ka danbeeya aysan matali karin magaca soomaaliya ayna dhawaana magacaabi doonaan masuuliyiin cusub oo matali kara shacabka iyo qaranimada Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa uu hoosta ka xariiqay in wasaaradu ay wado qorshayaal ku aadan xulida ciyaaryahanada soomaaliyeed oo uu sheegay in laga xuli doono dhamaan gobolada dalka oo dhan garoomo kale gadisan iyo dhaqaale ay ka raadin doonaan dalalka saaxiibada la ah soomaaliya si loo tayeeyo ciyaaryahanada iyo garoomada.
Waxaa xusid mudan ayuu yiri mudane Maxed muxiyidiin in ay haboon tahay marka loo baahdo goobo nabad ah oo kubada lagu ciyaaro in aan haysano waxaana uu tusaale usoo qaatay magaalooyinka Puntland.
Ugu danbayntii hadalka wasiirka ayaa yimid xilli maalmo ka hor xulkeena qaranka goolal indho ka qarsi ah ay uga adkaadeen xulka itoobiya ciyaar ka dhacday magaalada Adisababa ee xarunta itoobiya taasoo loogu soo baxayay tartanka kubada cagta aduunka ee lagu qaban doono wadanka Brazil sanada 2014.
Maxamed Cali Iimaan